Edgar Wright Akagadzira Tsika 60 Rwiyo Runyorwa rwe 'Husiku Husiku muSoho' - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Edgar Wright Akagadzira Tsika 60 Rwiyo Rwunoteedzerwa 'Husiku Husiku muSoho'
Edgar Wright Akagadzira Tsika 60 Rwiyo Rwunoteedzerwa 'Husiku Husiku muSoho'
by Trey Hilburn III October 10, 2021 261 maonero
Edgar Wright achangoburwa Husiku Husiku muShoho ichaenda pane yangu yepamusoro gumi runyorwa pasina kupokana. Iyo yemagetsi, yakashongedzwa firimu. Iyo inonakidza nyika uye kuchovha. Chimwe chezvinhu zvinomira mufirimu matambo anoshamisa ayo Wright akaisa pamwechete kurira kwefirimu.
Pamusoro pe ruzha uye zvibodzwa zvemufirimu, Wright akaisa pamwe chete rwiyo rwemakumi matanhatu rwiyo kubva kunguva iyo inounza mundangariro Usiku Husiku muSoho. Unogona kuteerera kune playlist paSpotify kana Apple Music uye uvimbe nesu zvakakodzera nguva yako. Isu tanga tichiteerera pazviri pamusoro pekudzokorora.
Mutsara we Husiku Husiku muShoho inoenda seizvi:
Mumukurumbira director Edgar Wright anonakidza wepfungwa, Eloise, anoshuvira fashoni dhizaini, anoshamisa zvinoshamisa kupinda muma1960 kwaanosangana nemuimbi anoyevedza wannabe, Sandie. Asi kupenya hakusi kwese kwazvinoita sekunge zviroto uye zvekare zvakatsemuka uye kutsemuka kuita chimwe chinhu chakasviba zvakanyanya.
Rwiyo rwekutamba rwunoshamisa kukwira uye inzira yakanaka yekugadzirira kuburitswa kwemafirimu. Kuti upe playlist yekuteerera musoro pamusoro HERE.
Uri kufara kuona Husiku Husiku muShoho? Regai tizive pane edu Facebook kana Twitter zvirevo.